19 Job wee zaa, sị: 2 “Ruo ole mgbe ka unu ga na-akpasu mkpụrụ obi m iwe,+ Jirikwa okwu na-egbu mmụọ m?+ 3 Unu abaworo m mba ugboro iri ugbu a; Ihere adịghị eme unu na unu na-emeso m ihe n’obi ọjọọ otú a.+ 4 Ọ bụrụgodị na m mehiere ihe,+ Ọ bụ n’isi m ka ihe m mehiere ga-adị. 5 Ọ bụrụ n’ezie na unu na-ebuli onwe unu elu imegide m,+ Na-egosikwa na nkọcha a na-akọcha m kwesịrị ekwesị,+ 6 Marazienụ na ọ bụ Chineke duhiere m, O jiriwokwa ụgbụ ya gbaa m gburugburu.+ 7 Lee! M na-eti, ‘Ihe ọjọọ!’ ma ọ dịghị onye na-aza m;+ M na-eti mkpu enyemaka, ma ikpe ziri ezi adịghị.+ 8 O jiriwo nkume rụchie mgbidi n’ụzọ m,+ enweghịkwa m ike ịgafe; Ọ na-emekwa ka ọchịchịrị gbaa n’okporo ụzọ m.+ 9 Ọ napụwo m ebube m,+ O kpupụwokwa okpueze m kpu n’isi. 10 Ọ na-adọda m n’akụkụ niile, m wee laa n’iyi; Ọ na-efopụkwa olileanya m dị ka osisi. 11 Ọ na-eweso m iwe dị ọkụ,+ Ọ na-ewerekwa m ka onye iro ya. 12 Ndị agha ya agbakọwo aka bịa mee ka ụzọ ha dịrị elu imegide m,+ Ha na-agbakwa ụlọikwuu m gburugburu. 13 O mewokwa ka ụmụnne m nọrọ m n’ebe dị anya,+ Ndị maara m esiwo ọbụna n’ebe m nọ pụọ. 14 Ọ dịkwaghị ndị mụ na ha na-akpachi anya,+ Ndị m maara echefuwokwa m, 15 Bụ́ ndị bi n’ụlọ m dị ka ndị ọbịa;+ ohu m ndị inyom na-ewerekwa m ka onye si esi bịa; Aghọwo m onye ala ọzọ n’anya ha. 16 M na-akpọ onye na-ejere m ozi òkù, ma ọ naghị aza m. Eji m ọnụ m na-arịọ ya ka o nweere m ọmịiko. 17 Ume m na-ekupụta aghọwo ihe nwunye m na-asọ oyi,+ Aghọwokwara m ụmụ si n’afọ nne m ihe na-esi ísì ọjọọ. 18 Ụmụaka ajụwokwa m;+ M bilie ọtọ, ha na-amalite ikwu okwu megide m. 19 Ndị niile mụ na ha na-akpachi anya na-asọ m oyi,+ Ndị m hụrụ n’anya aghọwokwa ndị na-emegide m.+ 20 Abụzi m ọkpụkpụ ọkpụkpụ,+ Ejisiri m ike* lanahụ. 21 Ndị enyi m, metụrụnụ m amara, metụrụnụ m amara,+ N’ihi na aka Chineke emetụwo m.+ 22 Gịnị mere unu ji na-akpagbu m otú Chineke na-akpagbu m,+ Ma ghara inwe afọ ojuju n’ahụ́ m? 23 A sị nnọọ na e dere okwu m ede! A sị nnọọ na e dere ya ede n’akwụkwọ! 24 A sị nnọọ na e ji mkpịsị ígwè+ na pensụl dee ya, Kanye ya n’oké nkume ruo mgbe ebighị ebi! 25 Amaara m nke ọma na onye mgbapụta+ m dị ndụ, Amakwa m na mgbe m nwụsịrị, ọ ga-ebili+ guzoro n’elu ala. 26 Mgbe ha gbasịrị m akpụkpọ, lezienụ otú m dị! N’agbanyeghị na anụ ahụ́ m alawo n’iyi, m ga-ahụ Chineke, 27 Bụ́ onye mụ onwe m ga-ahụ,+ Onye anya mụ onwe m ga-ahụ, ọ bụghị onye ọzọ. Akụrụ m adawokwa mbà n’ime m. 28 N’ihi na unu na-asị, ‘Gịnị mere anyị ji na-akpagbu+ ya?’ Mgbe ọ bụ mụ onwe m kpatara nsogbu ahụ. 29 Tụọnụ egwu n’ihi mma agha,+ N’ihi na njehie na-eweta ọnụma mma agha, Ka unu wee mara na e nwere onyeikpe.”+
Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ ‘eji m akpụkpọ ezé m lanahụ.’